» नकआउट राउण्डमा भिड्नेहरु, भाग १ (भिडियो)
नकआउट राउण्डमा भिड्नेहरु, भाग १ (भिडियो)
मकवानपुर, १६ असोज । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो ‘द भ्वाईस अफ नेपाल’ को सिजन २ मा अहिले ब्याटल राउण्ड चलिरहेको छ । डिजिटल अडिसन हुँदै ब्लाईन्ड अडिसनबाट छनौट भएका ६४ जना प्रतियोगीहरुले अहिले ब्याटलमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यस भिडियो सिरिजको पहिलो भागमा नकआउट राउण्डका लागि छानिएका ४ जना प्रतियोगीहरु विकास लिम्बु, विजय राई, रीता राई र सुशान्त गौतमका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । नकआउटका लागि छानिएका अन्य प्रतियोगीहरुका बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलका अन्य भिडियोहरु हेर्नुहोला ।
विकास लिम्बु, झापा, हाल काठमाडौँ– ब्याटल राउण्डबाट नकआउटका लागि छानिएका पहिलो प्रतिभा हुन् झापाका विकास लिम्बु । उनले ब्याटलमा मकवानपुरकी रमा घतानी यादवसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ‘साराङ्गीको धुनले’ बोलको गीतमा प्रतिस्पर्धा गरेका विकासले नकआउटका लागि बाजी मारे । साँगितिक परिवारमा जन्मिएका विकासले सानैदेखि गीत गाउन थालेका हुन् । ५ वर्षदेखि काठमाडौँमा संघर्ष गरिरहेका विकासले संघर्षकै बिच गजल साँझमा गजल समेत गाएका छन् । उनले राम्रो प्ले ब्याक सिंगर हुने सपना पालेका छन् । उनी कोच दिपको टिममा छन् ।
विजय राई, ईलाम, हाल काठमाडौँ – ब्याटल राउण्डबाट नकआउटका लागि छानिएका दोस्रो प्रतिभा हुन् ईलामका विजय राई । उनले ब्याटलमा पाल्पाकी अनुशा आचार्यसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ‘साँझ परेपछि’ बोलको गीतमा प्रतिस्पर्धा गरेका विजयले नकआउटका लागि बाजी मारे । अध्ययनसँगै जागिरे जिवन बिताईरहेका विजयको पारिवारिक पृष्ठभूमि सँगीतको नभएता पनि सँगीतलाई उनी औधी माया गर्छन् । अवसर मिल्ने बित्तिकै गीत गाउन थालिहाल्ने विजयले आफ्नो गाउँको परम्परा अनुसारै गीत गाउन सिकेका हुन् । सँगीत क्षेत्रमै करियर बनाउने उदेश्यका साथ काठमाडौँमा आएका विजयले ब्लाईन्ड अडिसनमा चारै जना कोच फर्किएका थिए । उनी कोच राजुको टिममा छन् ।
रीता राई, संखुवासभा– ब्याटलबाट नकआउटका लागि छानिएकी तेस्रो प्रतिभा हुन् संखुवासभाकी रीता राई । उनले ब्याटलमा कोलोराडोमा बस्दै आएकी सम्झना पाण्डेसँग प्रतिस्पर्धा गरेकी थिईन् । ‘जाउँ जाउँ रेलैमा’ बोलको गीतमा प्रतिस्पर्धा गरेकी रीताले नकआउटका लागि बाजी मारिन् । जन्मिएको ४ वर्षदेखि आँखा नदेखे पनि रीताले जीवनलाई सँगीतले उज्यालो बनाएकी छिन् । सानैदेखि गीत गुनगुनाउने रीता कोच आश्थाको टिममा छिन् ।
सुशान्त गौतम, ईलाम – ब्याटलबाट नकआउटका लागि छानिएका अर्का प्रतिभा हुन् ईलामका २२ वर्षीय सुशान्त गौतम । उनले ब्याटलमा राजीव पाठकसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ‘गहिरो’ बोलको गीतमा प्रतिस्पर्धा गरेका सुशान्तले नकआउटका लागि बाजी मारे । उनी आफु संगीतमा निरन्तर लागिरहेको बताउँछन् । उनी सिजन २ मा चारै जना कोचलाई आफुतिर फर्काउन सफल चौथो प्रतियोगी समेत हुन् । उनी कोच प्रमोदको टिममा छन् । आदरणीय दर्शविन्द यी प्रतियोगीहरुमध्ये तपाईलाई कसको आवाज मनपर्छ ? तपाईको विचारमा फाईनलसम्म कुन प्रतियोगीहरु पुग्न सक्छन् ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।